Seenaa Haroo Calalaqii – Fana Broadcasting Corporate
Seenaa Haroo Calalaqii
Finfinnee, Onkololeessa 19,2011(FBC)-Godina Jimmaa aanaa Cooraa Botoritti kan argamu Seenaa Haroo Calalaqii.
Haroon calalaqii bakkeewwan hawwata tuurizimii aanaa Cooraa Botor keessatti argaman keessaa ishee tokko yoo ta’u, magaala Jimmaa irraa kallattii dhihaan 102 km fagaatee kan argamuu fi giddu gala aanaa magaala Baggee irraa 10km fi magaala ganda miiccaa dirree irraa 2km fagaatee aanolee sadii aanaa Limmuu Kossaa, aanaa Limmuu Saqqaa fi aanaa Cooraa Botoriin marfamee argama.
Bal’inni isaas lafa hektaara 50 ol qabatee kan argaamu yeemmu ta’u, Bineensoonni adda addaa keessatti ni argaman keessaa, Qurxuummii , Roobii, Mar’ataa fi Simbira abbaa waaqoo maqaa kaasuun ni danda’ama.
Akka seenaan ibsutti bakki yeroo ammaa haroo calalaqii jedhamuun beekamu kun, bara durii bakka jireenya namootaa akka ta’e himama. Kunis namoonni hanga manneen 40 ta’an waliin irra jiraataa turan.
Namoonni kunniin otuma achirra jiraatanuu booda keessa lafti jiidhinsa agarsiisaa dhufee yeroo gabaabaa keessatti galaanni duraan hin jirre namoota kanneen qabeenya isaanii waliin irra gara galuun akka fixe himama.
Namoota baay’ee bakka kana turan keessaa dubartoonni sirna kadhannaa Aadaa ateetee waliin kabajataa turan. Sirna kana keessatti faaruu adda addaa tiin jiidha, quufa,nageenyyaa fi kkf bifa kadhannaatiin faarfatu. Yeroo kana akka taasaa bakkichi kun jidhinsa godhataa dhufuudhaan gara harootti jijjiirameera.
Erga bakki kun harootti jijjiiramee booda mootota akka Mangistuu Haayilamaariyaamiin daawwatamee jira.
Waajjira Kominikeeshinii aanaa Cooraa Botoriitin